कर्मचारीको तलब वृद्धि, कुन तहको कति ?? – Himshikharnews.com
कर्मचारीको तलब वृद्धि, कुन तहको कति ??
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:४६
काठमाडौंँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा कम्तीमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महँगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई यथावत राखेको छु,
यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन गई पेशागत निष्ठा बलियो भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु ।’’